မည်​ကာမတ္တာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » မည်​ကာမတ္တာ	7
Posted by naywoon ni on Mar 30, 2015 in Poetry |7comments
မည်​ကာမတ္တာ ပါပဲ ။
တစ်​ကဲ့ တည်းတည်း​လေးမှ တည်းတည်း​လေး
ခလုပ်​​တွေကများ ဘယ်​ခလုပ်​ အရင်​ပိတ်​ရပါ့ ။
စာဖြစ်​ရုံ မည်​ကာမတ္တာမျှသာ ။ ​နေ၀န်းနီ
Mike says: .မည်​ကာမတ္တ ရေးထားတာလေး မည်​ကာမတ္တ ပဲဖတ်သွားပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: မမြဲခြင်းတရားကိုသိနေရင်
အာဏာပါဝါထိုင်ခုံ ဆိုတာတွေ ရှိမှာမဟုတ်
အေးလေ သူတို့ လည်း မည်ကာမသာ အဲ မည်ကာမတ္တ တွေပဲ ဟာ
Ma Ei says: မည်​ကာမတ္တာလို့ သိနေတာကဘဲ အတော်သိနေပီ…
Alinsett@Maung Thura says: .ကျနော့် ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဦးဇောတိက ဟောဖူးတဲ့ တရားစကားလေး ပြန်သတိရ… .ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပါပြီး..ခြေလက်တွေနဲ့ စားကာသောက်ကာ ပြောကာဆိုကာ လှုပ်ရှားသွားလာနေရရုံနဲ့ လူဖြစ်ပြီလို့ မဆိုနိုင်….
လူပီသအောင်.. ရထားတဲ့ လူ့ဘဝကို အကျိုးရှိအောင် လုပ်နိုင်မှ လူဖြစ်မှာ…တဲ့…
.ယောက်ျားဆိုလည်း ယောကျာ်းကောင်း…မိန်းမဆိုလည်း မိန်းမကောင်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်မှ…
လူဖြစ်ရကျိုး နပ်မှာ..တဲ့ … ။
ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ လူဖြစ်ရကျိုး မနပ်တဲ့ လူ မပီမသတွေ အများကြီး…
Kaung Kin Pyar says: လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံလဲ Top 10ထဲပါတယ်…။ အိုက်ဒါ ဥက္ကဌမကောင်းလို့…။
လူဖြစ်ကျိုးနပ်ဖို့ကတော့ … လူ့ဘွဆိုတာ လမ်းဆုံလမ်းခွတစ်ခုလိုပဲတဲ့..။ အထက်ကိုတက်မလား အောက်ကိုဆင်းမလားဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပေါ်ပဲ မူတည်တယ်….။ လူ့ဘ၀ကို ရခဲ့တာ ဒီအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးလိုက်သလိုပဲ…။ သို့သော်…ဒီအခွင့်အရေးကို အသုံးမချနိုင်သူထဲမတော့ ကိုယ်လဲ ပါနေသေး….။
သြော်…. အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ
naywoon ni says: မည်​ကာမတ္တာ ကွန့်​မန့်​များအတွက်​ မည်​ကာမတ္တာ ​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါ​ကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ရွေးတာတော့အထက်ကိုတက်ဖို့ပဲ